ELS, English Language School (Kyaukroe Village) (အင်္ဂလိပ်စာ စာသင်ကျောင်း (ကျောက်ရိုးရွာ)
4:18 AM | No Comments |
ဒီနေ့တော့ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ အီဒီယမ်ကိုဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ့်။ မိတ်ဆွေတို့လည်းကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါတယ်။
eats likeahorse - အစားကြူးသည်။ အစားပုပ်သည်။
It's not surprising Krat Khaing Zan is so big. She eats likeahorse.
မြတ်ခိုင်ဇံတစ်ယောက် ဝနေတာကတော့ အံသြစရာမဟုတ်ဘူး။ သူမက အရမ်းအစားကြူးတာကို။
cats and dogs - အလွန်
Please take an umbrella as it's raining cats and dogs.
badger - အတင်းတိုက်တွန်းသည်။
I didn't want to go out with her but she badgered me into it.
ကျွန်တော်က သူမနဲ့အတူ အပြင်မသွားချင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူက ဇွတ်ပဲ။
a cat has got your tongue - စကားမပြောတတ်ဘူး။
Answer me, Mrat Khaing Zan! What's the matter - hasacat got your tongue?
ဖြေလေ၊ မြတ်ခိုင်ဇံ။ ဘာလဲ။ နင်စကားမပြောတတ်ဘူးလား။
for donkey's years - တော်တော်ကြာပြီ။
Is that you Mrat Khaing Zan? Gosh - I haven't seen you for donkey's years!
မြတ်ခိုင်ဇံဟုတ်တယ်နော်။ ဘုရားရေ။ နင့်ကိုငါမတွေ့တာ တော်တော့်ကိုကြာပြီနော်။
go ape - စိတ်ဆိုးသည်
Oh no, I've forgotten my homework. The teacher will go ape!
အို! မဟုတ်သေးပါဘူး။ ငါ အိမ်စာတွေကိုမေ့ကျန်ခဲ့ပြီ။ ဆရာကတော့ စိတ်ဆိုးတော့မယ်။
Hold your horse - ခဏစောင့်ပါ။
Hold your horse, Mrat Twan. I'll help you when I'm ready.
ခဏစောင့်နော် မြတ်ထွန်း။ အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် ငါကူညီမှာပါ။
in the dog house - ပြဿနာတွေ့ပြီ။ ကွိုင်တက်ပြီ။
I forgot my wife's birthday and now I'm in the dog house.
ငါကတော့ ငါ့မိန်းမမွေးနေ့ကိုမေ့သွားတယ်။ အခုတော့ ကွိုင်တက်ပြီ။
as quiet asamouse - အလွန်အေးတဲ့သော။
She won't disturb you - she's as quiet asamouse.
ခင်ဗျားကို သူမ မနှောင့်ယှက်ပါဘူးဗျ။ သူမက အလွန်အေးတဲ့သူပါ။
lizard - ပုတ်သင်ညို
snake - မြွေ
crocodile - မိကျောင်း
tortoise - လိပ်
rat - ကြွက်
mouse - ကြွက်
cock - ကြက်ဖ
ant - ပုရွက်ဆိတ်
butterfly - ယင်ကောင်
wasp - နကျယ်ကောင်
caterpillar - ခူကောင်
cockroach - ပိုးဟပ်
wolf - ဝံပုလွေ
camel - ကုလားအုတ်
dog - ခွေး
goat - ဆိတ်
sloth - မျောက်မောင်းမ
ape - မျောက်ဝံ။ လူဝံ။
badger - ခွေးတူဝက်တူ
goldfish - ရွှေငါး
shark - ငါးမန်း
salmon - ဆော့လ်မွန်းငါး
eagle - လင်းယုန်ငှက်
penguin - ပင်ဂွန်ငှက်
parrot - ကျေးငှက်
dodo - ဒိုဒိုငှက်
ostrich - ငှက်ကုလားအုပ်
General English, IDIOMS, vocabulary
Vocabulary: The crisis after Russian jet was shot down by Turkey
IS အဖွဲ့ကို အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေက ဝိုင်းချေမှုန်းနေကြတာ ဒီတလော ပိုမိုပြင်းထန်လာတယ်။ IS ကိုသွားရောက် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ရုရှားလေယာဉ်ကို တူရကီနိုင်ငံကပစ်ချလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ အခြေအနေဟာ ပိုမိုချုပ်ထွေးလာနေတယ်။ ကမ္ဘာ့သတင်းတွေမှာလည်း ဒီအကြောင်းကို အထူးတလည်ဖော်ပြနေကြတာကိုတွေ့မြင်နေရပါ တယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဖတ်တဲ့အခါ အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်လျှက် ကမ္ဘာနာမည်ကြီးသတင်းဌာနတွေက ရေးသားနေကြတဲ့ ရုရားနဲ့ တူရကီဆိုင်ရာ သတင်းတွေက ထုတ်နှုတ်၍ ဝေါဟာရတပိုင်းတစတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
dispatch (v) - စေလွှတ်သည်။
warship (n) - စစ်သင်္ဘော။
parachute (n/v) - လေထီး။ လေထီးဖြင့် ခုန်ဆင်းသည်။
warplane (v) - စစ်လေယာဉ်။
rescue helicopter (n) - ကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဉ်
was hit with (phr v) - နှင့်ပစ်ချခဲ့သည်။
anti-tank missile (n) - တင့်ကားဖျက်ဒုံး။
rebel group (n) - သူပုန်အဖွဲ့။
revenge (n) - လက်စားချေခြင်း။ ကလဲ့စားချေခြင်း။
in any revenge attack (phr) - ဘယ်လိုလက်စားချေတိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုမဆို
be on standby (phr v) - အဆင်သင့်ရှိနေသည်။
shot downaRussian military plane (phr v) - ရုရှားစစ်လေယာဉ်ကိုပစ်လိုက်သည်။
declare (v) - စစ်ကြော်ငြာသည်။ အရေးကြီးသည်ကိုကြော်ငြာသည်။
accuse (v) - စွပ်စွဲဝေဖန်သည်။
' stab in the back' (phr) - နောက်ကျောကိုဓားဖြင့်အထိုးခံရခြင်း။
accomplices (n) - ကြံရာပါများ။
branding them (Turks) 'accomplices of terrorists' (phr) - တူရကီကို အကြမ်းဖက်သမားများ၏ ကြံရာပါများအဖြစ်သတ်မှတ်လျှက်။
monstrous (adj) - ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဖြစ်သော။
crisis (n) - အကျပ်အတည်း ။
sparking fears ofawar (phr) - စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားလာမည်ကိုစိုးရိမ်၍
warn (v) - သတိပေးသည်။
downedaRussian military jet (phr v) - ရုရှား ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကိုပစ်ချခဲ့သည်။
incident (n) - မတော်တဆဖြစ်ပွားမှု။
have broken off (phr v) - ဖြတ်တောက်လိုက်ပြီ။
any military contact with Turkey (phr)- တူရကီနှင့် ဆွက်သွယ်မှုမှန်သမျှကို။
in the fight against ISIS (phr) - ISIS ကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရာတွင်။
with an air defence system (phr) - လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့်အတူ။
deployawarship - စစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုစေလွှတ်သည်။
cruiser (n) - ခရုဇာစစ်သင်္ဘော။
potential (adj) - အလားလာရှိသော။
any targets representingapotential danger (phr) - အန္တရာယ်ပြုနိုင်သည့်ဟုယူဆရသော ဘယ်ပစ်မှတ်ကိုမဆို။
destroy (v) - ဖျက်ဆီးပစ်သည်။
defence ministry (n) - ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး။
air-craft or aircraft carrier (n) - လေယာဉ်တင်သင်္ဘော။
air-force (n) - လေတပ်။
airstrikes (n) - လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ။
Russian bombers (n) - ရုရှားဗုံးကြဲလေယာဉ်များ။
carry out airstrikes (phr v) - လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်သည်။
be escorted by jet fighters (phr v) - ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များပူးကပ်လိုက်ပါသည်/
pilot (n) - လေယာဉ်မှူး။ လေသူရဲ။
Two Russian pilots (n) - ရုရှားလေယာဉ်မှူးနှစ်ယောက်။
were shot dead by Syrian (phr v) - ဆီးရီးယားသူပုန်အဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခြင်းကိုခံရ၍သေဆုံးသည်။
as they parachuted from their burning plane - သူတို့မီးလောင်ပေါက်ကွဲသွားသည့်လေယာဉ်မှ
footage (n) - (ရိုက်ကူးထားသည့်) ဗွီဒီယိုဖိုင်။
a dead pilot covered in blood on the ground (phr) - သွေးသံရဲရဲဖြင့် မြေပြင်မှာသေနေသော
anti-government fighters (n) - အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သူများ။
a Russian pilot who went missing (clause) - ပျောက်ဆုံးနေသော ရုရှားလေယာဉ်မှူးတစ်ယောက်။
ataRussian air base in Syria (phr) - ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ ရုရှားလေတပ်စခန်းတွင်။
co-pilot (n) - တွဲဖက်လေယာဉ်မှူး
had strayed into its airspace (phr v) - ၄င်းတို့၏ဝေဟင်ပိုင်နက်ထဲသို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သည်။
was flying over Syrian territory - ဆီးရီးယားနိုင်ငံဝေဟင်ပိုင်နက်တွင်ပျံသန်းနေခဲ့သည်။
what has happened to the body of the other pilot - တစ်ခြားလေယာဉ်မှူးတစ် ယောက်ရဲ့ အလောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ။
at the request of Turkey (phr) - တူရကီနိုင်ငံရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့်။
an "extraordinary meeting" (n) - အရေးပေါ်အစေည်းအဝေး။
after the shooting down of the Russian jet (phr) - ရုရှား ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ပစ်ချခံရပြီးနောက်။
ally (n/v) - မဟာမိတ်။ မဟာမိတ်ဖွဲ့သည်။
was dead on landing (phr v) - ဆင်းသက်စဉ်တွင် သေဆုံးခဲ့သည်။
ejected from his downed warplane (phr v) - ပစ်ချခံရတဲ့လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ခုန်ထွက်လာခဲ့သည်။
intoagovernment-held area (phr) - အစိုးရထိမ်းချုပ်နယ်မြေထဲ့သို့။
badly wounded on the ground (phr) - မြေပြင်တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိသော။
violate Turkish airspace (phr v) - တူရကီဝေဟင်ပိုင်နက်ထဲသို့ကျူးကျော်သည်။
crushed on Syria territory (pphr v) - ဆီးရီးယားပိုင်နက်တွင်ပျက်ကျခဲ့သည်။
a member of the Nato alliance - နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခု။
Vocabulary: an attack on Paris, French
7:43 PM | No Comments |
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့တော်တွင် အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူပေါင်းရာနဲ့ချီသေဆုံးခဲ့ရတယ်။ ဒီအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်၍ အမေရိကန်သမ္မတ ဘရတ်အိုဘားမား ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြပါရှိတဲ့ စာသားအချို့ကို Vocabulary ကဏ္ဍမှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
an attack - (အကြမ်းဖက်) တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု
an attack not just on Paris - ပဲရစ်မြို့ကိုသာ တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘူး
an attack not just on the people of France - ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကိုသာ တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘူး
an attack on all of humanity - လူသားထုတစ်ရပ်လုံးကို တိုက်ခိုက်ခြင်းတစ်ခုပဲ
universal - ကမ္ဘာ (စင်္ကြာဝဠာ)နှင့်ဆိုင်သော
values - တန်ဖိုးများ
stand prepared and ready to provide - အကူအညီပေးရန်အတွက် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပြီ
whatever assistance that the government and the people of France need to respond - ပြင်သစ်အစိုးရနှင့် ပြင်သစ်လူမျိုးတို့ တုန့်ပြန်ရန်လိုအပ်တဲ့ ဘာအကူအညီပဲဖြစ်ဖြစ်
oldest - အကြာဆုံး၊ အအိုဆုံးဖြစ်သော
ally - မဟာတ်မိတ်
have stood - ရပ်တည်သည်
shoulder to shoulder - ပုခုံးချင်းကပ် (ပုခုံးချင်းယှက်)၍
with the United States - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်
stand together with them - သူတို့(ပြင်သစ်)လူမျိုးတို့နှင့်အတူတကွရပ်တည်သည်။
in the fight against terrorism and extremism - အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့်အစွမ်းရောက်ဝါဒကိုဆန္ဒတိုက်ဖျက်ရာတွင်။
"This is an attack not just on Paris, it’s an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. We stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need to respond. France is our oldest ally. The French people have stood shoulder to shoulder with the United States time and again. And we want to be very clear that we stand together with them in the fight against terrorism and extremism."
General English, vocabulary
Reading Series: Story Reading:The Crow And The Pitcher
6:56 AM | No Comments |
ဒီတလော ပုံပြင်ဖတ်စရာတွေပဲတင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လည်း ကမ္ဘာကျော် အီစွတ် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူ့ဘဝမှာ အခက်အခဲအကျပ်အတည်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါ ယင်းအကျပ်အတည်း အခက်အခဲကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ ဇဝနဥာဏ်ရှိသူတို့က ယင်းအခက်အခဲတို့ကို ကျော်လွှားနိုင်လေ့ရှိကြတယ်။ ဒီ The Crow And The Pitcher - ကျီးကန်းငှက်နှင့်ရေကရား - ပုံပြင်တွင်လည်း လူသားလောက်အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ သတ္တဝါက သူ့ရဲ့အခက်အခဲကို ဘယ်လိုကျော်လွှားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီပုံပြင်ကိုဖတ်ပြီးနောက် သူငယ်ချင်းတို့လည်း မှတ်သားစရာ အတုယူစရာတစ်ခုခုတော့ ရရှိကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါတယ်။
An illustration for the story The Crow And The Pitcher by the author Aesop
inaspell of dry weather - ခြောက်သွေ့တဲ့(နွေရာသီ)တွင်။
very little - နည်းနည်းလေး။
when the Birds could find very little to drink - ကျေးငှက်သာရကာတို့ဟာ သောက်ရေနည်းနည်းလေးပဲတွေ့နိုင်သောအခါတွင်။
a thirsty Crow - ရေဆာနေတဲ့ ကျီးကန်းငှက်။
found - ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
a pitcher - ရေကရားတစ်ခု။
withalittle water in it - အထဲတွင် ရေအနည်းငယ်ဖြင့်။
high - အမြင့်။
no matter - ကိစ္စမရှိပါဘူး။
how he tried - သူဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာ။
could not reach the water - ရေကိုလှမ်းမမှီနိုင်ခဲ့ပေ။
as if - သကဲ့သို့။
must die of thirst - ရေဆာလို့သေဆုံးရမယ်။
then - ထိုနောက်။
an idea came to him - သူက အင်ဒီယာတစ်ခုရလိုက်တယ်။
picking up - ကောက်ယူ၍။ ကောက်ယူရင်း။
some small pebbles - ကျောက်စရစ်သေးသေးလေးများ။
he dropped them into the pitcher one by one - ကျောက်စရစ်ခဲကလေးများကို ရေကရားထဲ့သို့ တစ်လုံးချင်းစီပစ်ထည့်လိုက်သည်။
the water rosealittle higher - ရေနည်းနည်းစီမြင့်တက်လာသည်။
inapinch - တကယ်လိုအပ်နေသေအခြေအနေတွင်။ အကျပ်အတည်းကြုံတွေ့နေရချိန်တွင်။
wit - ဇဝနညာဏ်။ ထိုးထွင်းညာဏ်။
help us out - ငါတို့ကိုကူညီသည်။
Folktale, Reading, Short Story
Reading Series: Story Reading: The Lark And Her Young Ones - ဘီလုံးငှက်မနှင့် သားသမီးများ
7:01 AM | No Comments |
Reading Series အတွက် ကမ္ဘာ့ကျော် အီဇွတ်ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကို ထပ်မံပြီး တင်ပြပေးပါမယ်။ ပုံပြင်အမည်ကတော့ The Lark And Her Young Ones - ဘီလုံးငှက်မနှင့် သားသမီးများ - ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသားတွေနှင့် အသုံးအနှုန်းတွေလည်း ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ စကားလုံးများနှင့် စကားစုများအကုန် နီပါးကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ ဘာသာပြန်၍ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါတယ်။
Lark - ဘီလုံးငှက်။
inafield of young wheat - ဂျုံပင်စိုက်ခင်းတွင်။
As the days passed - ရက်တွေကြာလာပြီးနောက်/ သောခါ။
the wheat stalks - ဂျုံပင်ရိုးတံများ။ ဂျုံပင်များ။
grew tall - မြင့်လာခဲ့သည်။
grew in strength - ခွန်အားတွေပြည့်လာသည်။
breeze - လေပြေလေညှင်း
when the ripe golden grain waved in the breeze - လေထဲမှာ ရွှေရောင်လွှမ်းပြီးမှည့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဂျုံစေ့တွေဝှေ့ယမ်းနေသောအခါတွင်။
came into the field - လေကွင်းသို့လာခဲ့သည်။
be ready for reaping - ရိတ်သိမ်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
call in - အကူအညီတောင်းသည်။
neighbors - အိမ်နီးချင်းများ။
harvest - ရိတ်သိမ်းသည်။ (စပါး၊ သီးနှံစသည်တို့ကို)
the young Larks in their nest close by - အနီးအနားရှိ အသိုက်ထဲမှာ ဘီလုံးငှက်ပေါက်ကလေးများ။
were much frightened - အလွန်ကြောက်ရွံ့သွားခဲ့ကြသည်။
for they knew they would be in great danger - ကြီးစွာသောဒုက္ခကြုံတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာကို သိသောကြောင့်။
if they did not leave the nest - အသိုက်မှမထွက်သွားလျှင်။
before the reapers came - ဂျုံရိတ်သိမ်းမယ့်သူများမလာမီ။
for them - ဘီလုံးငှက်ပေါက်ကလေးများအတွက်။
returned with food - အစာရေစာတို့ဖြင့်ပြန်လာခဲ့သည်။
they told her what they had heard - ဘီလုံးငှက်ပေါက်စကလေးများက သူတို့ကြားလိုက်သည့်အကြောင်းစုံကို သူတို့မခင်အားပြောကြားခဲ့ကြလေ၏။
"Do not be frightened, children," said the Mother Lark. - မကြောက်ကြပါနဲ့သားတို့ သမီးတို့ရေဟု မိခင်ဘီလုံးငှက်ကပြော၏။
to help him do his work - သူ့(လယ်သမား)အလုပ်ကိုကူညီဖို့ရန်။
If the Farmer said he would call in his neighbors and friends - လယ်သမားက သူရဲ့အိမ်နီးနားချင်းမိတ်ဆွေတို့အား အကူအညီတော်ဖို့ ပြောရင်။
wheat - ဂျုံ။
not be reaped forawhile yet - လောလောစဉ်တော့မမှည့်သေးဘူး။
A few days later - ရက်တွေအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့။
so ripe - တော်တော်မှည့်လာပြီဖြစ်သော။
when the wind shook the stalks - ဂျုံပင်တို့ကို လေတိုက်သောအခါ။
a hail of wheat grains - ဂျုံစေ့များ။
came rustling down on the young Larks' heads - ဘီလုံးငှက်လေးများခေါင်းပေါ်သို့ညွတ်ကျလာသည်။
"If this wheat is not harvested at once," - ဒီဂျုံတွေကို ချက်ချင်းမရိတ်သိမ်းရင်တော့။
crop - ကောက်ပဲသီးနှံ။
we shall lose half the crop - ဒီသီးနှံတွေတစ်ဝက်ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။
cannot wait any longer for help from our friends - သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အကူအညီကို မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။
we must set to work, ourselves - မနက်ဖန် ငါတို့ကိုယ်တိုင်အလုပ်စရမယ်။
we must be off at once - ငါ့တို့ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ကြရတော့မယ်။
Whenaman decides to do his own work and not depend on any one else - တစ်ပါးသူကို အားမကိုးပဲ လူတစ်ယောက်က သူ့အလုပ်ကို (သူကိုယ်တိုင်)လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်သောခါ။
may be sure - သေချာမယ်။ သေချာတယ်။
there will be no more delay - အချိန်ဆွေးမနေတော့ဘူး။
flutter - တောင်ပံခတ်သည်။ တဖျပ်ဖျပ်ပျံသည်။
wings - တောင်ပံများ။
at sunrise next day - နောက်နေ့နေထွက်ချိန်တွင်။
cut down the grain - ဂျုံရိတ်ခဲ့သည်။
found an empty nest - ငှက်သိုက်အခွံကိုတွေ့ခဲ့သည်။
Self-help is the best help. - မိမိကိုယ်ကို ကူညီခြင်းသည် အကောင်းဆုံးကူညီခြင်းဖြစ်၏။
ပုံပြင်ဖတ်ရင်း ဗဟုသုတလည်းရ အင်္ဂလိပ်စာလည်း တိုးတက်နိုင်ကြပါစေ။